eNasha.com - पाइखाना गायब !
रसियाको दूरदराज इलाकामा भेडा चराएर बस्ने किसान बोरिस उर्मातोभ राति सुत्न जाँदा पाइखाना गईवरि सुतेका थिए । तर बिहान उठेर नियमित क्रिया गर्न जाँदा त पाइखाना गायब ! राति त सद्दे नै छाडेर गएको पाइखाना बिहान अकस्मात गायब हुँदा कुन चाहिँ किसानको मन नदुख्ला !
पाइखाना भए ठाउँमा त अर्कै ढसमस्स उभिएको ! शुरुमा त उनले भेउ पाउनै सकेनन्, ट्वाइलेटको ठाउँ ओगट्ने यो के जन्तु हो ? तर पछि थाहा भयो, यो त रुसको स्पेस एजेन्सीको अन्तरीक्ष यान परिक्रमा गर्ने रकेट पो रहेछ !
यसपछि बोरिस उर्मातोभले रुसको स्पेस एजेन्सीलाई १० लाख रुबल (४२ हजार डलर) को दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । कजाखस्तान छेउको बैकोनुर लन्च प्याड छेउमा रहेको रसकसमस एजेन्सीको रकेट उनको पाइखानालाई हटाउँदै आफैँ त्यहीँ झरिदिएछ । उनको पाइखानाको त त्यहाँ नाम निशानै बाँकी छैन ।
"राति कुनै विष्फोट भएझैँ भयो र ती किसानको न्रि्रा खल्बलायो । उनी राति आँखा नदेख्ने हुनाले उनकै पाइखानामाथि रकेटको केही टुक्रा खस्यो भन्ने उनले थाहा पाएनन्", उर्मातोभकी दिदी मरिनाले रोयर्टसलाई बताइन् । यो रुसको अल्र्टाई क्षेत्रमा पर्दछ ।
"पछि त उनको पाइखानालाई छोप्ने गरी अण्डाकारको ठूलो धातुको केही चिज रातारात अड्डा जमाइसकेको रहेछ", उनले भनिन्- "मेरो भाइको घरै धन्न उडाएनछ !"
उनको पाइखाना उडेपछि त्यसको क्षतिपूर्तिका लागिमुद्दा हालेको उनले बताइन् ।
उस्त कान क्षेत्रका अर्का छिमेकी एनातोले काजाकोभले चाहिँ बेलाबेलामा रकेटका छिटाहरुको वर्षा प्रायः भइरहने बताए । यो क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ रकेट उड्ने बेलामा घरबाहिर निस्कने अनुमति नदिइने गरेको पनि कानले बताए ।
यता रसकसमसले चाहिँ यहाँका बासिन्दालाई रकेट उड्ने र ओर्लने बेलामा स्थानीय जनताहरुलाई नियमित रुपमा सूचना दिने गरेको बताएको छ । ५० वर्षको रकेट उडानको इतिहासमा ४ सय रकेट उडिसकेका छन् । यस क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ मात्र तोकिएको क्षेत्रबाहिर केही पार्टपूर्जा खसेको रसकसमसले बताएको छ ।
"प्रविधिगत रुपमा तपाइँलाई खासोखास कुरा गर्ने हो भने जब रकेट उड्छ केही पार्टपूर्जा खस्छन्, केही पार्टपूजा खस्छन् भने रकेट अवश्य उड्छ । त्यसैले यो धेरै चिन्ताको कुरा चाहिँ होइन", रसकसमसका प्रवक्ता अलेक्जेण्डर भोरोबिभले बताए ।
यदि साँच्चिकै क्षति भएको देखिए र अदालतले तिर्ने आदेश दिए आफूहरुले क्षतिपूर्ति दिने गरेको उनले बताए । यता एउटा पत्रिका इज्भेस्तियाले रसकसमसले एक पटक मात्र यस्तो क्षतिपूर्ति दिएको बताएको छ । सन् २००१ मा उसले १० हजार रुबल तिरेको थियो ।
उदेकलाग्दो मुद्दा मामिला माया सुन्दरी सेलेब्रिटी गुगल विज्ञापन बलिउड भव्यता इन्टरनेट नग्नता फट्याइँ श्रीमानश्रीमती मूर्ख्याइँ उपाय परिस्थिति हलिउड कीर्तिमान उदारता प्रविधि